धनका पछि दौडेका लोभी डाक्टरहरु – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
धनका पछि दौडेका लोभी डाक्टरहरु
२०७० चैत्र २०, बिहीबार ०१:४९ गते
मान्छेको जातै लोभी । दुनियाँका जीवित मान्छेहरु सबै लोभी छन् । कोही धनका लोभी, कोही पदका लोभी, कोही तरूनीका लोभी, कोही दूधका लोभी त कोही रक्सीका लोभी । लोभी नै लोभी मानव संसारका करिब सात अरब मान्छेमध्ये नेपालमा गनिएका २ करोड ६५ लाख मान्छेहरु पनि थरीथरीका लोभी छन् । जोसँग जे छैन, त्यसकै लोभ गर्ने मान्छेको स्वभावअन्तर्गत नेपाली नागरिकहरुलाई विदेशीले गरिब भनिदिए । त्यसैले, यिनका जातले साँच्चै–साँच्चै आफूलाई गरिब ठाने र यिनले धनको अचाक्ली लोभ गरे । धन बटुल्दा दायाँबायाँ नघुमी सीधै स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने ठानेरै होला, यो जातले बरू ज्यान जाओस् धनचाहिँ जसरी पनि बटुल्ने सोच बनाए ।
सबै धनका लोभीहरु धन बटुल्ने अभियानमा सफल हुँदैनन् । कोही सफल हुन्छन्, कोही हुँदैनन् । कोही सफल भए, कोही भएका छैनन् । नेपालमा अचाक्ली धनको लोभ गर्ने रानी ऐश्वर्य राजदरबारमा आयोजित हत्याकाण्डमा मारिइन् । बिचरा, तिनलाई हीराको गहना लाउन अचाक्ली रहर थियो । दुनियाँमा कुनै नयाँ हीराको डिजाइन उत्पादन हुने बित्तिकै उनी राजा वीरेन्द्रको अगाडि उभिएर कपाल कन्याउँथिन् र आफ्ना इच्छा पूरा गर्थिन् । तिनले खुब धन बटुलेकी थिइन् । नेपाल राष्ट्रको महारानी, देशभरिका नागरिकले झुकेर नमस्कार गर्ने । मान्छेले बाँचुञ्जेल बढीमा चाहेको एक प्रकारको आनन्द हो, त्यो सम्मानमा पाइन्छ । पछाडि ज–जसले जे–जे भने पनि अगाडि पर्दा झुकेर इज्जत दिएकै थिए । रानी ऐश्वर्यले धनको लोभ गर्न जरूरी थिएन, तर तिनको बुद्धि शून्य थियो । धनको लोभी थिइन् । आखिरमा तिनको शरीर गोलीले क्षत्विक्षत् पा¥यो । लोभी रानी मरिन् । दुनियाँले देख्नेगरी काठमाडौँको आर्यघाटमा तिनको ज्यानमा आगो झोसियो । हेर्दाहेर्दै तिनको ज्यान खरानी भएर आकाशमा उड्यो । प्रमाण साक्षी छ, त्यो भिडियो रेकर्ड आज पनि नेपाल टेलिभिजनको कार्यालयमा सुरक्षित छ । नपत्याए फेरि एक पटक प्रसारण गर्न लगाएर हेरे हुन्छ, “रानी ऐश्यर्यले केही पनि लान नपाएको दृश्य” देख्न सकिन्छ ।
रानी ऐश्वर्यले बुद्धि नपुगेर जम्मा गरेको धन नेपालका पैसा नभएर उपचार अभावमा मर्न पर्ने अवस्थाका मान्छेलाई सहयोग गरेको भए कल्याण हुन्थ्यो । पढ्न नपाएका नेपालीका सन्तानलाई त्यो रकम खर्च गर्न सकिएको भए राम्रै हुन्थ्यो । हाडछाला घोट्दासमेत ६ महिना खान पाउने र छ महिना गिठा–भ्याकुरमा जिन्दगी धान्ने नेपालीको पेटमा अन्नको दाना हालिदिन पाएको भए त्यो सबैका लागि खुशीको विषय हुन्थ्यो । तर, लोभी रानीको बुद्धि त पुगेन–पुगेन, बुद्धि भएकाहरुले समेत तिनलाई सल्लाह दिएनन् । उनी मरिन् । थाहा छैन, तिनको त्यति ठूलो धनराशि कसले पचायो । हिजोआज पनि रेडियोले एउटा सूचना भन्छ– “राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यका परिवारको नाममा कतै सम्पत्ति भेटे खबर गर्नुहोला र पुरस्कार जित्नुहोला ।” सुन्ने मान्छेको अलिअलि भएको इज्जत पनि चुहिएला भन्ने पाराले यो विज्ञापन बजिरहेको छ, अर्थात् सरकारले पत्ता लगाउन नसकेको राजारानीको सम्पत्ति जनतामध्येबाट कुनै नागरिकले पत्ता लगाई पो हाल्छ कि !
धनका लोभीमध्ये काठमाडौँमा बसेर टाउकाको उपचार गर्ने न्यूरो सर्जन डाक्टर छन्, एक जना । तिनको नाम उपेन्द्र देवकोटा हो । एउटा कोणबाट व्याख्या गर्ने हो भने उनी यो देशका सबै जनताका साझा सम्पत्ति हुन् । उनको मान्छे बचाउने खुबीबाट धेरै नेपाली जनताले लाभ पाएका छन् । त्यस्तो खुबी भएका डाक्टरी पेसा गर्ने नागरिकलाई सबैले सम्मान पनि दिनुपर्छ । तर, अचम्म र विडम्बना पनि हुँदोरहेछ । तिनै डाक्टर उपेन्द्र धन थुपार्ने मामलामा यतिसम्म लोभी रहेछन् कि प्राप्त खबरले यसो भन्छ– “मान्छेको एक खप्पर फोरफार पारेर फेरि जोडजाड” गरेबापत् उनी कम्तीमा एक लाख रूपैयाँ शुल्क लिन्छन् । यो राष्ट्रिय मापदण्ड होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि होइन । उनलाई नेपाल सरकारले एउटा टाउको चिरेर फेरि जोडेबापत् लाख रूपैयाँ शुल्क लेऊ भनेको पनि होइन, तर उनी लिन्छन् । जनताले दिनैपर्छ, दिन्छन् । किनकि, नदिए मरिन्छ दिए बाँचिन्छ । कारण हो, डाक्टर उपेन्द्रको धनमोह अर्थात् लोभ । यिनको परिवारमध्ये सायद दुई–चार पुस्तालाई दाल, भात, तरकारी खान पुग्ने सम्पत्ति यिनीसँग अहिले पनि छ । नचाहिने पाराले यिनले धन जम्मा गर्दा अपराधीहरुले यिनकी छोरी मेघालाई अपहरण गरेर बन्धक बनाए । डाक्टरले फिरौतीबापत् करोडभन्दा बढी रकम बुझाए । अपराधीहरु पक्राउ परे, त्यो बेग्लै पक्ष हो तर ती लोभी डाक्टरले अचाक्ली धन नथुपारेका भए ती नानी अपहरित नहुन पनि सक्थिन् । यसो भन्नेहरुलाई सोह्रै आना गलत भन्न पनि मिल्दैन । चाहिनेभन्दा ज्यादा धन सबैका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले नबुझ्नु बेग्लै कुरा हो । त्यतिविघ्न खुबीवान् र दक्षिण एसियामै इज्जत प्राप्तिका हिसाबले चर्चित डाक्टर उपेन्द्र अचाक्ली धनका लोभी भएर देखिनु नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्णबाहेक अरु हुनै सक्दैन ।
अचाक्ली धनका लोभीहरु अरु पनि छन् तर यथार्थ यो हो, कर्मका हिसाबले सबैको चर्चा हुँदैन । देशको महारानी भएकी हुँदा रानी ऐश्वर्यको चर्चा भयो । उपेन्द्र देवकोटाजस्ता न्यूरो सर्जन नेपालमा दुई दर्जन पनि छैनन् । ती दुर्लभ मान्छे हुन्, त्यस कारण तिनको चर्चा भयो । अब अर्का डाक्टर छन्, चर्चा लायक लोभी । तिनको पनि चर्चा यसरी हुन्छ । डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठ हो तिनको नाम । सत्य यही हो, तिनी भूतपूर्व गरिब हुन् । अहिले तिनी धनी छन् । धनी भएको प्रमाण तिनले आफू अपहरणमा पर्दा एक करोडभन्दा बढी फिरौती नै बुझाएको बुझियो । काम गरेर मेहनतै गरेर कमाएको भए पनि तिनी धनी भएको प्रमाण त्यो एक करोडले दिन्छ । कुरा छर्लंग छ– डाक्टर भक्तमानले करोड–करोड रकम जम्मा गरेको अपराधीहरुले सुइँको पाएको हुँदा नै तिनलाई अपहरण गरे । उनी आफूले त दुःख पाए–पाए, तिनकै कारण चितवनका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्द भए, जसका कारण हजारौँ बिरामीले ठीक समयमा उपचार पाएनन् । मानवअधिकार हनन् भयो । भक्तमानका हजारौँ शुभचिन्तकहरु आज पनि भन्छन्, क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षजस्तो सम्मानित पदमा आसीन व्यक्ति किन निजी अस्पतालमा बिरामी जाँच्न जानुप¥यो ? दुई–चार पुस्तालाई पुग्ने धन त कमाइ भइसक्यो, अब कति चाहियो ? अहँ, भक्तमान कसैको कुरा सुन्दैनन् । उनी एकोहोरो पैसाका लागि मरिहत्ते गरेर लागेको लाग्यै गरे । यिनी देशका लागि अति आवश्यक नागरिक भक्तमान डाक्टर, सबैले यसरी नै चिन्छन् । मर्न लागेका बिरामीहरुको यिनले ज्यान जोगाएका छन् । त्यो कोणबाट हेर्दा यिनलाई सलाम गर्नुपर्छ, तर यिनको खराबीले दुनियाँलाई पि¥यो । निजी गाडी किनेर चढ्न नसक्ने होइनन् यी डाक्टर । तर, लोभले यिनको आँखा यतिसम्म टालियो कि क्यान्सर अस्पतालको गाडी यिनले निजी अस्पतालमा बिरामी जाँच्न जान प्रयोग गरे । तरूण दल भनिने नेपाली कांग्रेसका नानीबाबुहरुको एक समूहले त्यो गाडी समातेर पुलिसलाई बुझाए । निकै मेहनत गरेर डाक्टर भक्तमानले कमाएको इज्जतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भइहाल्यो ।
बुझ्न नसकिएको एउटा कुरा यो पनि छ । जो जति धनी हुँदै गयो, तिनलाई त्यति नै धनको लोभ किन जाग्दै जान्छ ? चेतना कमजोर भएर हो ? कमजोर चेतना भनौँ भने सामान्य परिवारमा जन्मिएका डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा एक प्र्रकारका वैज्ञानिक पनि हुन् । के तिनको चेतनास्तर कमजोर छ भन्ने आँट जिउँदो नेपालीमा कसैको होला ? तर, त्यो प्रश्न उठाउन सकिँदैन भने तिनी त्यतिविघ्न धनको लोभ किन गर्छन् ? डाक्टर भक्तमान र डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा झन्डै–झन्डै उस्तै छन् । कुनै कोणबाट पनि डाक्टर भक्तमानलाई खोट लाउन सकिँदैन, उनको धनको लोभी चरित्रलाई छाडेर । नेपाली दुनियाँ डाक्टर उपेन्द्र र भक्तमानलाई औधी सम्मान गर्छन्, तर साथसाथै तिनको लोभी चरित्रको पनि भित्रभित्रै विरोध गर्छन् । बेलैमा यस्ता डाक्टर र अन्य राष्ट्रियस्तरका लोभीहरुले आफूलाई बदल्न सके सबैको कल्याणै होला । होइन भने, आज डाक्टर भक्तमानको गाडी तरूण दलमार्फत प्रहरीकहाँ पुग्यो, भोलिका दिनमा अन्य लोभीहरुको हालत पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । अचाक्ली धनका लोभी महाशयहरु, धन अस्थायी हो । शरीर पनि अस्थायी हो । आँखाले देखेका सबै चीज अस्थायी हो, देख्ने आँखा पनि अस्थायी हो । त्यस कारण बिन्ती छ, दुःखका कारणहरुमध्ये एक “धन” प्रति अति लोभ नगरौँ ।